Ubuqili bokuqhagamshela i-LEGO Boost ibluetooth xa ungadibanisi- Ikkaro
yokuqalisa >> Amathoyizi >> Ukunyusa iLego >> I-LEGO Boost ayizukuxhuma iBluetooth
Eyona ngxaki iphambili endiye ndadibana nayo okwangoku I-LEGO Boost robot kukuba kuxhomekeke kwisixhobo (ithebhulethi okanye i-smartphone) kunzima kakhulu kwiBluetooth ukudibanisa. Kwimeko yam isebenza kakuhle nge-BQ Aquaris X Pro, kwaye kakubi ngeHuawei T5 kunye ne-Samsung A7.
Njengoko siqhubela phambili izikrini zeLego, kuza ixesha apho kufuneka sivavanye iirobhothi kwaye sikwazi ukwenza inkqubo kunye neebhloko ekufuneka zidityaniswe ngeBluetooth. Ekuqaleni Kuya kuba lula njengokucinezela iqhosha eliluhlaza kwiHubhu yokuHamba Yeyiphi ibhloko ephambili yeRobot.
Kodwa xa kutyhalwa kuza kutyhalwa, izinto zihlala zintsokotha.
Emva kovavanyo oluninzi kubonakala ngathi Ndifumene indlela esebenza kakuhle kwaye oko kuya kusithintela ekuchitheni ixesha sizama ukutshatisa kwaye siphele kwimithambo-luvo yethu.
Kum iyandisebenzela i-100% yexesha. Ndishiya ividiyo kwaye emva koko isifundo sibhalwe kumanyathelo kwifomathi yesiko.
Ndenze ifayile ye- Isikhokelo sokumazi uHub Hub ngokunzulu
Ukudibanisa njani ibluetooth yethebhulethi okanye ye-smartphone kwi-LEGO Boost Move Hub
Isisombululo senyathelo ngenyathelo xa ungadibanisi ngeBluetooth
Phuma kwi-Lego Boost application.
Yenza kungasebenzi iBluetooth yethebhulethi.
Faka usetyenziso kwiscreen osishiye ngaphambili.
Iya kukuxelela ukuba kufuneka usebenzise ibluetooth yethebhulethi ukungena
Cofa iqhosha eliluhlaza kwiHubhu yokuHamba
Ukhetha kwaye usebenze olo khetho kwithebhulethi kwaye wamkele iimvume
Kwaye u-voila, uqhagamshele ngoko nangoko.
Uya kuyazi ukuba idityanisiwe kuba isikhokelo sokuHamba kweHubhu sijika sibe luhlaza okwesibhakabhaka. Kulo mfanekiso ulandelayo ubhangqiwe. Jonga abakhokeleyo
Phambi kokufumanisa le ndlela ingentla, ndizamile ukudibanisa iBoost kunye nethebhulethi ngqo ngokhetho lwethebhulethi yeThebhulethi. kodwa xa uzama ukuzidibanisa zicela i-PIN.
Ewe, loo PIN ayikho, ndizamile nezo zihlala zisetyenziswa ku-0000, 1234, njlnjl kodwa akukho nto kwaye ndikhangela ulwazi kwiwebhusayithi esemthethweni ye-LEGO bayasilumkisa ukuba asinakuyidibanisa ngale ndlela kuba i-PIN zikhona.
Malunga ne-LEGO Boost
Ukuba ufuna ukubona Yintoni i-LEGO Boost ungaphoswa ziimpawu zethu.
Yirobhothi eyenzelwe abantwana. Kuyandothusa ukuba ngcono, bendicinga ukuba iya kuncipha, kodwa enkosi ukuKhangela indawo yenkqubo yenziwe lula kwaye enkosi ngokuhlanganiswa neLeGO ngokulula sinokwenza umahluko ongapheliyo weRobot yethu.
Kwibhlog yethu esithethe ngayo ngamanye amaxesha iirobhothi ezenziwe ngeArduino kodwa banobuhlobo obuncinci bomntwana. Lo uhlanganiswe kuphela yintombi yam eneminyaka emi-6 ubudala kwaye uqalile ukwenza inkqubo ngebhloko elandela imiyalelo yesicelo.
Ukuba ucinga ukuba unayo Apha ungayithenga.
Ndishiya ukulinda uphononongo olupheleleyo lokukhuthaza ukuba eli nqaku lenzelwe ukusombulula ingxaki yeBluetooth.
Okokugqibela, ukuba ungumphuhlisi kwaye / okanye ufuna ulwazi lobuchwephesha malunga neBluetooth firmware, iLego Boost ingaya kuyo github apho kukho ulwazi oluninzi. Ngexesha lokubhala basebenzisa i-LEGO Wireless Protocol 3.0.00
Kwaye oku ukwazi ngakumbi malunga Bluetooth
izigaba IWindows, Amathoyizi, Ukunyusa iLego Ukuhamba kwetikiti
Amagqabantshintshi ama-2 kwi "LEGO Boost ayidibanisi iBluetooth"
Agasti 16, 2021 kwi-9: 08 am
Oku kulandelayo kuyandisebenzela:
1. Cima iLego Boost Hub.
2. Vula usetyenziso kwaye ukhethe ukhetho lokuvumelanisa i-Hub.
3. Xa i-Hub icinyiwe, cofa iqhosha eliluhlaza kwaye ulibambe kangangemizuzwana eli-10 de kube sekukhanyeni ebomvu.
4. Ukhetho lokuhlaziya iFirmware luya kuvela kwiApp.
Ngale nto ukulungele ukusebenzisa.
Agasti 25, 2021 kwi-8: 05 pm
Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho. Lungisa nje isipho somhla wokuzalwa sonyana wam esingadibaniyo. Ungumsindisi wobomi x
1 Ukudibanisa njani ibluetooth yethebhulethi okanye ye-smartphone kwi-LEGO Boost Move Hub
2 I-PIN ayikho
3 Malunga ne-LEGO Boost